केशर शमशेरले जूवामा एक लाख जिते र, बनाए यो ‘गार्डेन अफ ड्रिम्स’ - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
केशर शमशेरले जूवामा एक लाख जिते र, बनाए यो ‘गार्डेन अफ ड्रिम्स’
कृष्ण आचार्य काठमाडौं कार्तिक २२
भनिन्छ नि १२ वर्षपछि बगेको खोला पनि फर्कन्छ। बगैँचाको सवालमा पनि त्यस्तै भयो। अष्ट्रियन सरकारले १० लाख डलर सहयोग गरेपछि २०६४ मा यसले पहिलेकै रुप पायो र, गार्डेन अफ ड्रिम्स अर्थात स्वप्न बगैँचा बन्यो।
चारैतिर मानिसको भीडभाड छ। कोही हातमा मोबाइल, क्यामेरा लिएर सुन्दर दृश्यहरु कैद गर्न व्यस्त छन् त कोही मनोरम दृश्यावलोकन गरिरहेका। लाग्छ, शान्त वातावरणले सबैको मनमा उमंग छरेको छ। सबैको मुहारमा खुसी फुलिरहेको छ, जसरी त्यहाँ अनेकथरी बैरंगी फूल फुलेका छन्।
काठमाडौं धूलो, धुवाँ र प्रदुषणको शहर भनेर चिनिन्छ। चारैतिर ठूला घर र कोलाहाल छ। तर, यहाँको भित्री कथा अलि फरक छ। यही काठमाडौंमा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरुमात्र होइन, प्राक–ऐतिहासिक उद्गमस्थलहरु पनि छन्। जुन स्थलबारे मानिसलाई थाहा त छ तर, त्यसको ऐतिहासिक पक्ष अवगत छैन। त्यस्तै एउटा ठाउँ हो, काठमाडौंको ठमेलमा अवस्थित ‘गार्डेन अफ ड्रिम्स’।
सन् २०१३ मा टाइम पत्रिकाले विश्वका घुम्नैपर्ने १० स्थानमध्ये काठमाडौंको गार्डेन अफ ड्रिम्सको नाम पनि समावेश गर्यो। त्यसले नेपालमा मात्र नभएर विश्वका धेरै देशमा राम्रै चर्चा बटुल्यो। सबैले गार्डेन अफ ड्रिम्सको कलात्मक शैली तथा सौन्दर्यताको प्रशंसा गरे। नेपाली मिडियामा यसबारे समाचार आएपछि त्यहाँ पुग्ने आन्तरिक पर्यटक बढे। अहिले दैनिक सयौँ मानिस गार्डेन अफ ड्रिम्समा पुगेर आनन्द लिन्छन्, तस्बिर खिच्छन्, रमाउँछन्।
‘खास बगैँचा बन्नुको रहस्य त यस्तो रहेछ नि?’ बोर्ड सदस्य शेर्पाले प्रश्नपछि मुख खोले, ‘हामीले पनि त्यही सुनेका हौँ, आँखाले देखेको चाहिँ होइन। धेरै इतिहासका जानकारहरुले यसै भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यसलाई आधार मानेर हामीले पनि अहिलेसम्म मानेकै छौँ।’
बगैँचा जूवा खेलेर जितेको पैसाले बनाएको प्रमाण बगैँचाभित्र पनि छ। त्यहाँ धनकी देवी लक्ष्मीको मूर्ति छ। त्यसकै आडमा कौडाको तस्बिर छ। त्यसको संकेत के हो त ? बगैँचाको रेखदेखमा झन्डै १८ वर्ष बिताएका तारा दाहाललाई यसको राज थाहा छ। भन्छन्, ‘केशर शमशेरले आफ्ना बाबुसँग जूवामा एक लाख रुपैयाँ जितेर यो बगैँचा बनाउनु भएको हो। जूवामा पैसा जितेकाले उहाँले यसको श्रेय धनकी लक्ष्मीलाई दिनुभयो र लक्ष्मीको मूर्तिसँगै कौडाको बिम्व पनि बनाउन लगाउनु भयो।’
सन् १९२० को दशकमा बनेको केशर बगैँचा केशर शमशेरले आफ्नो मृत्यु (सन् १९६४) अघि तत्कालिन श्री ५ को सरकारलाई हस्तान्तरण गरे। केशर शमशेरको मृत्युपछि बगैँचा अस्तव्यस्त बनिसकेको थियो। लामो समय बगैँचाको स्वरुप खन्डहरजस्तै रह्यो। भनिन्छ नि १२ वर्षपछि बगेको खोला पनि फर्कन्छ। बगैँचाको सवालमा पनि त्यस्तै भयो। अष्ट्रियन सरकारले १० लाख डलर सहयोग गरेपछि नेपाल भ्रमण वर्ष २०६४ मा आएर यसले पहिलेकै रुप पायो र, गार्डेन अफ ड्रिम्स अर्थात स्वप्न बगैँचा बन्यो। त्यसपछि यो सर्वसाधारणका लागि खुला गरियो। २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि बन्द भएको पुस्तकालय चाहिँ अझै खुलेको छैन।
‘२०७२ को भूकम्पका कारण केही ऐतिहासिक कुराहरु भत्किएका छन्’ बोर्ड सदस्य शेर्पा भन्छन्, ‘तर, धेरै त हामीले पुर्ननिर्माण गरिसकेका छौँ।’
हाल दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु गार्डेन अफ ड्रिम्स पुग्छन्। काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको यो स्वप्न बगैँचा युवाहरूबीच ‘डेटिङ स्पट’ पनि बनेको छ। तारा दाहालको यहाँनिर केही गुनासो छ। भन्छन्, ‘आगन्तुकहरुले नियो–क्लासिकल गार्डेनलाई केवल मनोरञ्जनस्थलको रुपमा मात्र बुझेका छन्। यसको ऐतिहासिक पक्षबारे पनि ज्ञान हुनु आवश्यक छ।’
पर्यटकीय केन्द्र ठमेलको प्रवेशद्वारमै १२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बगैँचा निकै मनमोहक छ। यो प्राकृतिक सौन्दर्यको एउटा अनुपम संग्रह पनि बनेको छ। त्यहाँभित्र रहेका चरा बस्ने घरहरु, कमल पोखरी, कृत्रिम झरना, बसन्त, गृष्म र शरद ऋतुको झझल्को दिनेगरी बनाइएका सदनहरु, विभिन्न प्रकृतिका वनस्पती फूलहरुले धेरैको मन पुलकित बनाउँछ।
अझ यहाँ रहेको आर्ट ग्यालरीमा शेखर शमशेरको पालाका तस्बिरहरु हेर्न पाइन्छ। र, गार्डेन घुमिसकेपछि भन्न मन लाग्छ– वाह, क्या सुन्दर!
प्रकाशित २२ कार्तिक २०७५, बिहिबार | 2018-11-08 10:38:16